Sawir qaadayaasha Isbaanishka: waa kuwee kuwa ugu muhiimsan | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | Fanaaniin
Spain waxaa ka buuxa fanaaniin waaweyn. Naqshadayaasha, qorayaasha iyo haa, sawirqaadayaasha sidoo kale. Xaqiiqdii, 2019, iyo sida laga soo xigtay guriga daabacaadda ee Taschen oo uruuriyay 100ka farshaxan ee ugu fiican adduunka, lix ka mid ahi waxay ahaayeen Isbaanish. Sidaas, Waan ku faani karnaa inaan heysano sawir qaadayaal Isbaanish ah.
Dhibaatadu waxay tahay, inaad u baahatid inaad la shaqeysid mooyee, iyagu isma yaqaaniin. Laakiin waxaan wax ka qabaneynaa halka hoose maxaa yeelay kama hadleyno oo keliya lixdaas sawiryahan ee Isbaanishka ah ee loo arko kuwa adduunka ugu fiican, laakiin sidoo kale magacyo kale oo bilaabaya inay si xoogan u muuqdaan oo ay tahay inaadan indhaha ka qarsan.
1 Sawir qaadayaasha Isbaanishka: xirfad weyn oo sawir ah
1.4 Sawirka meeleynta Cristina Daura
1.8 Sawir qaadeyaasha Isbaanishka: Sara Herranz
1.10 Sawir qaadayaasha Isbaanishka: Sergi Brosa
1.11 Sawir qaadayaasha Isbaanishka: Paqui Cazalla
Sawir qaadayaasha Isbaanishka: xirfad weyn oo sawir ah
Sawirka, iyo farshaxanka muuqaalka guud ahaan, ayaa si isa soo taraysa u qaadanaya masraxa dhexe. Hadda dadku uma baahna inay waqti ku lumiyaan akhrinta qoraallada, laakiin waa inaad soo jiidataa dareenka isticmaale kaliya 10 ilbidhiqsi. Haddii aad guuleysato, waa guul la hubo. Sidaa darteed, sawirayaashu aad bay muhiim ugu sii noqonayaan oo noocyada waaweyni way xaqiiqsadeen tan. Oysho, Reebok, Porsche waa dhowr magac oo ka mid ah magacyada caalamiga ah ee u adeegsaday sawirro qaar ka mid ah ololahooda, gabow ama casri, iyadoo ujeedadu tahay wax lala yaabo.
Si kastaba ha noqotee, maahan inaad ka baxdid banaanka Spain si aad u hesho xirfadlayaal sawir sare leh, sidoo kale dalkeena waxaa ku sugan sawir qaadayaal Isbaanish ah oo taagan. Oo halkan waxaa ku yaal xusid aad u yar oo ka mid ah boqollaal ka mid ah sawir qaadayaasha dhiigga Isbaanishka.
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah sawir qaadayaasha oo ah mid ka mid ah 100ka farshaxan ee ugu fiican adduunka sida ku cad guriga madbacadda Taschen (oo ay weheliyaan Carmen García Huertas, Dani Garretón, María Herreros, Sergio Mora iyo Bruno Santín).
Wuu istaagayaa maxaa yeelay wuxuu ku guuleystay inuu abuuro qaabkiisa, adiga oo aan cidna kudayanin, in kasta oo xoogaa saamayn ah, gaar ahaan moodada (oo leh khadadka inta badan la arko gaar ahaan marka la qorsheynayo suudadka, dharka iyo dharka guud ahaan naqshadayaasha).
Paula Bonet waxay ku fiicantahay isticmaalka khadadka la xarriiqay ee ay u isticmaalaan inay ku abuuraan hooska.
Warkiisa ayaa u ogolaaday inuu ku soo bandhigo Spain oo kaliya (Madrid, Valencia, Barcelona) laakiin sidoo kale dalal kale iyo magaalooyin kale sida Berlin, Belgium, Paris, Porto, London ... laakiin sidoo kale wuxuu la qabsadaa sawirka saxaafadda, rinjiyeynta muraayadaha, sawir gacmeedka ...
Waa maxay waxa aadka u xiisaha leh ee ku saabsan shaqadaada? Awoodda ay sawiradiisu muujiso iyo aragtida dheddig iyo jacaylka, mararka qaarkood melancholic, ee dareenka.
Sawir qaadayaasha Isbaanishka dhexdooda, magac in badan u muuqda waa Elena Pancorbo. Tanina waa sababta oo ah tusaalooyinkiisa waxay umuuqdaan inay leeyihiin nolol iyaga u gaar ah. Iyada oo lagu garaacayo garaacid aad u fudud oo toos ah, sawir qaadaha wuxuu iftiiminayaa qaybo ka mid ah sawirrada sameeya qofkasta oo iyaga fiiriya waa laqariiraa oo wuxuu ku hagaajiyaa kaliya qaybahaas, in kastoo inta soo hartay ay yihiin kuwo cakiran, sida haddii aysan macno lahayn. Marka, waxay kaliya diirada saareysaa waxa run ahaantii muhiim ah iyo gudbinta.
Haddii aad doorbideyso sawir qaadayaasha Isbaanishka ah ee adeegsada madow iyo caddaan, taas oo ah, kuwa ku gudbiya maqnaanshaha midabka, markaa hadda waad fiirin kartaa shaqada Daniel Ramos.
Sawira-bixiyahan wuxuu raadiyaa dhiirigelin dadka iyo sawirrada ah, taas oo ah sababta shaqooyin badan oo u eg ay ugu egyihiin sawirro dhab ah. Intaas waxaa sii dheer, oo wax aan dad badani ogeyn, waa inuu wax walba oo uu yaqaan ku bartay qaab iskiis wax u baray, taas oo ah, inuu iskiis wax u tababaray oo uu tartiib tartiib u tijaabinayo isla markaana uu abuurayo qaab u gaar ah.
Sawirka meeleynta Cristina Daura
Cristina si fiican looma yaqaan… hadda, laakiin way noqon doontaa. Sababtuna waxay tahay in sawirada uu samaynayo ay leeyihiin wax asal ah oo soo jiita dareenka. Waxaan dhihi karnaa wuxuu leeyahay taabasho ka dhigaya dhamaan shuqulladiisa kuwo kala duwan, laga yaabee sababtoo ah noqo hooligans, iskuday ama si fudud maxaa yeelay ma fileysid.
Siempre raadinta taabasho carruurnimo oo qurux badan, Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay waxa ka dhigaya tusaalooyinka Naolito inay soo jiitaan dareen aad u badan, maxaa yeelay waxay kicinayaan jilicsanaan, dareen diiran iyo kuwa aakhirka kaa dhigaya inaad dhoolla caddayso Oo haddaadan rumaysan, hubaal tusaalooyinka aan ku siin doonno tusaale ahaan waxay ina tusinayaan inay sax tahay.
Mid ka mid ah sawirayaasha Isbaanishka ee yaqaan ku dar retro muuqaallada maalinlaha ah iyo waxyaabaha khayaaliga ah. Natiijadu waa sawirro soo jiita dareenka isla markaana si fiican looga fiirsan karo, in badan oo iyaga ka mid ah, sida sheekooyin muuqaal ah.
Xaaladdan, sawirka waa lagu gartaa maxaa yeelay shuqulladiisa oo dhami waxay ku jiraan muuqaal. In kasta oo ay jiraan qaar ka mid ah astaamaha wejiga buuxa yihiin, runta ayaa ah in aqlabiyadda faylalka ay ka shaqeeyaan ay yihiin weji badh.
Wuxuu lashaqay noocyo muhiim ah, sida Fnac, Privalia ...
Sawir qaadeyaasha Isbaanishka: Sara Herranz
Diiwaangeli magacaaga maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay, sawir qaadayaasha Isbaanishka badan, mid siinaya wax badan in laga hadlo oo ay kuwa badani la shaqeeyaan. Sawir qaade ka socda Tenerife sharad on sawiro madow iyo caddaan, iyadoo taabashada ugu yar ee midabka mararka qaarkood. Laakiin waxa ugu badan ee ka taagan iyada ayaa ah muujinta sawiradeeda in kastoo ay u muuqdaan kuwo fudud, dhab ahaantii iyagu maahan.
Iyada oo ay weheliso sawirradan, qoraagu wuxuu kaloo soo jiitaa dareenka isticmaalaha weedho kaa dhigaya inaad milicsato.
Haddii ka hor intaanan ka dhihin Paula Bonet marka la eego sawirka moodada, kiiskan Carmen García Huerta sidoo kale waxay u jiidanaysaa qaabkaas. Sawiradiisa ayaa soo jiitay dareenka noocyada muhiimka ah sida Loewe, El País Semanal, Woman, Ragazza ama Elle.
In kasta oo sawirradiisu ay kala duwan yihiin, kuwa sida dhabta ah u cajabin kara ayaa ah kuwa iyagu abuuray, maxaa yeelay waa kuwa ugu cajaa'ibka badan, xaalado badan, waxay dhahaan in ka badan intaad ku aragto jaleecada hore.
Sawir qaadayaasha Isbaanishka: Sergi Brosa
Hadaad jeceshahay sawir ku saleysan manga, anime iyo farshaxanka fikradda ciyaarta ciyaarta, markaa waad la yaabi doontaa shaqada Sergi Brosa. Xaqiiqdii, sawirrada cajiibka ah waxay istaagaan meesha wax walba looga taxaddarayo faahfaahinta ugu yar.
Waqtigan xaadirka ah, shaqadiisu waxay diiradda saaraysaa qaybta ciyaarta fiidiyowga, markaa ha la yaabin in qaar ka mid ah ciyaaraha aad ku haysato gurigaaga uu sameeyo sawir-qaadahaan Isbaanishka ah.
Sawir qaadayaasha Isbaanishka: Paqui Cazalla
Qoraagu wuxuu leeyahay xariiqyo kala duwan, waana xaqiiqda taas ficil ahaan shuqulladiisa oo dhan timaha ku jira sawiradu waa dhaadheer yihiin oo aad moodo inay ku afuufayaan dabaysha, adoo siinaya mug badan una ekaanaya inay dhaqaaqi doonto daqiiqad kasta.
Intaa waxaa dheer, wuxuu ku fiican yahay sawir macquul ah, in kasta oo sawirada carruurtu aysan xumaan sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawirada Isbaanishka
7 nooc oo casri ah iyo sida loogu mideeyo nashqadahaaga